Mapassword: ndeapi mabhurawuza ari kuita zvisirizvo (kunze kweSafari) | Linux Vakapindwa muropa
Nezve mapassword: ndeapi mabhurawuza ari kuita zvisirizvo (kunze kweSafari) [Pfungwa]
Hongu. Bhurawuza aripo kusatonga zvakanaka mapassword. Sezvo ichi chiri chidimbu chekufunga uye saka zvichitaridzwa kunyangwe mumusoro wenyaya, ndichataura zvakaipa kwazvo. Inouraya. Uye ichi ndicho chinhu icho ini pachangu ndakanga ndisina kufarira kusvika pakatanga Firefox 79, ikozvino pachiteshi usiku hwoga hwoga neMozilla. Iyo vhezheni ichaburitswa muna Nyamavhuvhu ichauya iine nyowani ficha: iyo mukana wekutumira zvese zvitupa zvedu kune CSV faira. Panyaya yeLinux, panguva ino haina kana kukumbira password yayo.
Kunyangwe ini ndatanga kutaura nezveFirefox, ichi chinhu icho zvinoitika mu chrome, kusanganisira mukana wekutumira mapassword edu ku CSV faira iro rave riripo kwenguva yakareba muchirongwa cheGoogle, ayo ari maviri mabhurawuza anonyanya kushandiswa pasi rese uye ndizvo zvinoitika kune vamwe vazhinji vanobata mapassword. Chii chinetso kubva mumaonero angu? Chaizvoizvo, maviri: kurerukirwa kwekuita zvinhu uye kusavapo kweyambiro yekuti, kana tikasawedzera tenzi password, edu ese mapassword anozotorwa mune nyaya yemasekondi. Ine mhinduro? Hongu, uye kubva pakuona kwangu, pane yakapusa kwazvo yatakadzidza kubva kuApple.
1 Apple yakatidzidzisa kuti mabhurawuza anofanira kubata sei mapassword
2 Sei Firefox neChannel zvisizvo mapassword
3 Mhinduro dzinogoneka dzavanofanira kushandisa izvozvi
Apple yakatidzidzisa kuti mabhurawuza anofanira kubata sei mapassword
Kufananidza kune ruvengo, kunyanya pa blog yakaita seino panotarisirwa kuti Linux chete ndiyo ichakurukurwa, asi dzimwe nguva zvakafanira kuvhara zvishoma. Nezvo zvakatsanangurwa, ngatitaurei zvishoma nezve iyo apple kambani. Apple haina kumbobvira yagadzira chero vhiri, ndozvazviri. Chinhu chega chinoitwa nekambani inoitwa naTim Cook kutora pfungwa dzakange dziine vamwe, dzimwe nguva kuvanatsiridza vozovatengesa semumwe munhu. Chinhu chavakavandudza iko manejimendi mapassword, uye ikozvino ini ndinotsanangura nei.
Kunyangwe makomputa andakashandisa zvakanyanya agara aine Linux, ini zvakare ndine iMac yekare neWindows laptop. Ini ndaive neMac yangu isina password yemakore, kusvikira Apple yaburitsa iCloud Keychain uye ikandiudza kuti kana ndaida kushandisa chinhu ichocho, ndaifanira kuisa password pachigadzirwa. Ndakaipfeka. Zvino, kana ndichida kuona mamwe mapassword angu muSafari, ndinofanira kuisa password yemushandisi wangu (yeiyo inoshanda sisitimu). Kana ndikasaisa, ini handizoone CHINHU. Ini kana mumwe munhu hatigone kuwana zvitupa zvangu. Ichi ndicho chinhu chakarurama, pasina kupokana. Iko hakuna tenzi password mune browser uye mashandiro acho aiona nezvekundizivisa kuti kana ndaida kuve nemapassword angu pairi, ndaifanira kuseta password yekupinda.
Sei Firefox neChannel zvisizvo mapassword
Kunyangwe ndakanga ndisati ndambozvifunga, uye sekutsanangura kwandakaita pamusoro apa ndakazviita nekutanga kweFirefox 79 nebasa rayo idzva, chero Firefox kana Chrome haindibvunze chero chinhu kana ndichida kuona mapassword angu. Iwo mabhurawuza anofungidzira, zvisizvo fungidziro, kuti mushandisi akawana mukana webhurawuza ndiye muridzi wekomputa kana mumwe munhu akanyoreswa pairi. Naizvozvo, muFirefox tinogona kuenda ku nezve: logins, kuwana Zvakakombama uye ona vese vashandisi vedu, mapassword achivanzwa. Asi, zvakanakirei kuti zvakavanzwa kana tichigona kuzviteedzera kubhodhibhodhi? Zvishoma. Uye chinhu hachina kusiyana muChannel: isu tinoenda kuKuda / Autocomplete uye ndiko kwavari. Kana tikabata pane icon yeziso, ivo vanozoratidzwa. Chii chinogona kukanganisika?
Izvi zvinoita kuti tifunge nezve chero kesi yatinosiira komputa yedu kushamwari kana hama. Ini handizive, kuona vhidhiyo yemakiti paYouTube isu tichigeza, semuenzaniso, kwekudya kwemanheru kwatakarongera zuva irori. Isu hatina kuziva kuti shamwari iyi haisi shamwari yakanaka kana chero chikonzero chiri kuda kuwana yedu Facebook password. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuenda kune iwo mapassword chikamu, ona zita redu rekushandisa, teedzera pasiwedhi uye unamate mugwaro rerugwaro. Shamwari iyoyo yatove nekwaniso yekuwana yedu Facebook. Zviri nyore.
Izvi hazvizove zvakadaro muFirefox 79 ye Windows, iyo inotibvunza isu password (Yevashandisi vechikamu) kuburitsa mapassword ku CSV faira kana kuteedzera kubva Lockwise, asi mune yazvino Firefox 77 inotibvumidza kuti tivateedzere pasina kupinda chero chinhu. Firefox 79 yeLinux inoenderera ichibvumidza chero munhu kuti afambe nepassword file saPedro kumba, kunyangwe kana mushandisi asiri iye chaizvo anozivikanwa Pedro.
Mhinduro dzinogoneka dzavanofanira kushandisa izvozvi
Mumubvunzo wandakaita kuFirefox kuburikidza neTwitter nezve Linux shanduro, ndakaudzwa kuti ndinofanira seta password yekudzivirira iro dambudziko. Ko izvi? Izvo ini ndatoziva, asi vamwe havazvizive. Mhinduro haisi yekufungidzira zvinogona kuitika; mhinduro yacho inofanira kupihwa kwatiri nemakambani. Pese pazvinogoneka, ini ndaisatendera kupinda kweLokwise ndisina kupinda password yemushandisi (yeiyo system) uye ini ndaizokanganwa iro password tenzi. Kana zviri pamusoro zvisingaiti, uye muWindows zviripo, mabhurawuza anofanirwa kutizivisa nezve izvi sezvinoita Apple nemeseji yakadai sekuti "kungave iwe unoisa master password kana kuti haukwanise kushandisa makiyi acho." Zvandinofunga hazvisi sarudzo ndizvo zviripo nhasi: kana tikasazvifunga uye mumwe achidaro, tinofumurwa.
Saka ikozvino unoziva. Zvinhu zvinogona kuvandudzika, uye zvirinani iyo Firefox vhezheni yeWindows ichaita, asi mazuva ano mabhurawuza ese, zvirinani paLinux, asingatarisiri zvakanaka mapassword. Sezvo ivo vasingayambira nezve zvinogona kuitika kana tikasagadzira tenzi password, ndinozviita muchinyorwa chino, hatifanirwe kukanganwa kuti ipfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nezve mapassword: ndeapi mabhurawuza ari kuita zvisirizvo (kunze kweSafari) [Pfungwa]
Ichokwadi kwazvo, ini ndinoshandisa Firefox uye ndanga ndisingazive kuti ini ndinogona kuwedzera tenzi password kune zvinyorwa zvangu. Dai zvisiri zvechinyorwa ichi ndingadai ndisina kuziva. Vagadziri vacho havataure panguva yatinotanga kushandisa Lockwise. Icho chinonetsa.
Ini ndanga ndichitotanga kushandisa Bitwarden nekuti ndaifunga kuti mapassword angu aive asina kuchengetedzeka, unovimba neBitwarden here kana iwe unofunga kuti ndinofanira kutsvaga mumwe maneja?
Zvakanaka, kana ndikanzwisisa munyori nemazvo, mabhurawuza ane mhosva kune vashandisi vasingazive maficha avo (mune ino kesi, kuvepo kweshe password -chinhu chave chiri muFirefox kubvira Lower Palaeolithic-).
Kubva pane zvinotaurwa nemunyori, mhinduro ye "kukundikana" kwemabhurawuza angave ekuti password yekuwana maaccount akachengetwa yanga isiri chinhu chinosarudzika kumushandisi, asi chimwe chinhu chinosungirwa uye chakatemerwa nebhurawuza. Kusiya parutivi kuti ini ndinosarudza rusununguko rwekusarudza yemumwe mushandisi kugadzirisa browser kuti rifarire maererano nezvavanoda nemamiriro avo. Iyo Firefox tenzi password ine diki diki: Kana iwe ukanyoresa zvinoenderana nemawebhusaiti, inosvetuka iwe, pese paunovashanyira, yambiro yekuti iwe uise iyo master password (kunyangwe iwe usiri kuda kupinda panguva iyoyo. )
Kwete. Iwe hauna kunzwisisa zvakanaka. Ini ndinotaura nezve sarudzo. Mhinduro yandaizopa yaizoita seSafari. Ndiyo yakachengeteka. Kana zvisiri, sepaWindows, kwausingade tenzi password uye haugone kuendesa faira kana kukopa mapassword (Firefox).
Pane zvirinani, paLinux ivo vanofanirwa kukuyambira nezve izvi. Inogona kunge iri poka-joko (tsvaga iyo wiki) uye ini ndinotenda kuti mhosva iriko kune anovandudza. PaWindows, Firefox haizotisiyi takafumurwa. MuLinux, yakataurwa navo, uchafanirwa kuisa tenzi password. Uye kana zvirizvo, vanofanirwa kuraira. Apple inozviita. Ini handisi kuti kumanikidza, asi chii chakashata nekuzivisa?
Chero zvazvingaitika, chinyorwa ichi ndechekuti vanhu vazive njodzi yekuve nepassword mubrowser.
1. Ndakanga ndisingazivi kuti mapassword angu ese aive nyore kuwana.
2.Kutsanangura iro tenzi password kwave kuri nyore kwazvo uye kunoshanda.
Tichitarisa pa1 ne2, yambiro yakapusa pamusoro pekuchengetedza mapassword akachengetedzwa angave akakwana kudzivirira matambudziko mazhinji.
Kana izvo zvinogona kukuvara zvanyanya, uye mhinduro iri nyore, kutadza kunyevera nezve njodzi kunova kuregeredza.
Ini ndinonzwisisa kuti sezvo munyori akatenga iyo iMac, kudzamara ada kushandisa iCloud Keychain, raisave dambudziko rekuti hapana akamubvunza magwaro ekushandisa kana kuwana mapassword akachengetedzwa.
Aive nemukana wekuisa password kumushandisi wake mumuchina kubvira nguva dzose.
Ini ndinofungidzira kuti Apple yakakuzivisa kuti kana ukasaita kudaro, mapassword ako anga asingadzivirirwe.
Ndicho chikonzero nei pasina fananidzo neFirefox tenzi password iyo, sekutaura kwavakaita kare pano, yave iripo kubvira pakutanga kwenguva.
Mhoro. Kwave kuri kutevedzana kwezviitiko. Nguva zhinji, iwe haufunge nezve zvinhu zvakaita seizvi. Ndakafunga nezvazvo nekuti Firefox 79 inouya nebasa iro (kutumira kune CSV). Kuona kuti haina kundibvunza password, ndakaongorora zvimwe zvese ndikayeuka zvakapfuura. Iwo mapassword haafanire kuoneka, ndiwo maonero angu uye saka ndinozviratidza kunyangwe mumusoro wenyaya.
Zvakanaka, mune iyo Opera, pese pandinenge ndichida kuona mapassword angu, bhurawuza rinondibvunza kuti ndiise password yemushandisi yeiyo inoshanda sisitimu. Ini handina kuona zvinoitika kana zita rangu rekushandisa risina password.
Mhoro marcos. Saka zvinofanira kuva. Ini handishandisi Opera, asi izvo zvaunotaura zviri paLinux?
Ini ndinogadzirisa iwo meseji: muUbuntu 20.04, ini ndakaisa Opera, ndakachengeta password uye zvinonditendera kuti ndizvione ndisina kupinda chero password. Unoti inozviita sei?
Maonero angu ekuzvininipisa mukudzivirira mabhurawuza makuru ndeyekuti haichengetedze humbowo nekutadza, ndiye mushandisi anopa mvumo yekuvachengeta. Paunopinda saiti X, unobvunzwa kana iwe uchida kuchengetedza mapassword. Nei uchifunga kuti mushandisi mutoro kune vanogadzira webhu? Kana iwe ukachengeta iyo yako wega yekusununguka uye kana kuikweretesa kana ivo vaine iyo PC, mudiwa, zviite iwe pachako kune husina kunaka. Iwe wakayambirwa kare.
Mhoro Gabriel. Sezvaunonzwisisa, ini handibvumirani. Ukaverenga iyi wiki link unonzwisisa kuti sei https://es.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke
Wakamboona muchina wemaindasitiri mune yekupedzisira, ini handizive, makore makumi matatu? Ivo vane masystem ekuchengetedza ari humbowo hwekuregeredza kana kukundikana kwevanhu. Muchokwadi, kana iwe usinga "vatsemure" ivo (sekuvhara bhenji), haugone kuvhura mawadhi isina kumira. Zvandiri kubvunza pano chimwe chinhu chakafanana: kuti makambani anovandudza kufunga mikana uye kuchengetedza vashandisi.
Uye nezve izvo zvinokubvunza iwe kuti uchengetedze kana kwete, hongu, chokwadika, zvinokubvunza iwe, asi hazvikuudze chinhu kuti kana ukango chengeta, chero munhu achakwanisa kuzviona mumasekondi gumi. Kana iwe ukandiudza kuti ndiise yakareba chiziviso chinyorwa senge mazwi ekushandisa ayo isu tese tinogamuchira tisingatarise, zvakanaka, vangadai vakayambira uye isu takapasa. Asi handizvo.
Kune avo vatsva kuFirefox (kusanganisira avo kwemakore vachishandisa iyo Mozilla browser, zvikuru vasingazive nezve ayo mashandiro), kana vachida kunatsiridza mabhurawuza asi vasina ruzivo kana nguva yekupa mupiro pachezvako, pane ficha inonzi «Tumira Maonero», Ivo vanogona kuiwana kuburikidza:
Menyu bhatani> Rubatsiro> Tumira Mhinduro
Tab ichavhurika iyo iwe yaunobvunzwa kana iwe uchigutsikana neFirefox kana kwete, kana ukaipindura haizokukumbira kuti unyore muchidimbu nei, izvi zvinobatsira semhinduro yeMozilla yekutarisa mukuvandudza sevhisi yeFirefox browser, izvi ndizvo kumanikidzwa kwayakaitwa nenyaya yekuvanzika, kuiswa kwezvinhu izvo usati wagona kuburikidza nemapulagini, kuiswa kwakaringana kweHTML5 maficha ... Dai vapepeti veizvi nedzimwe nharaunda dzemitauro dzakasiyana siyana munyika yakarongeka kugadzirisa dambudziko iri zvakawandisa, Mozilla inogona kuitora zvakadzama mukufunga kwechikamu chinotevera cheFirefox browser.
Pakutanga, ini ndaimboshandisa sevhisi iyi zvakanyanya kuona kuvandudzwa kwakabatanidzwa mubrowser pasina kushandisa plugin kana kumhanyisa HTML5 zvine mutsindo, asi chakanyanya kukosha ndechekuti kare pavakatumira mhinduro vaikupa iyo Link kuti iwe ugone uteedzere mazano ako, dambudziko racho here?, kuti iwe ugone kupinza mazano evamwe pasi rese uye ubatsirane kuti vaone zvinowedzerwa izvi kana kuti pagadziriswe chero chikanganiso, izvo zvisisaitike, uye handione kwekutevera izvozvi, zvisinei, mune rutsigiro rweMozilla Vanoramba vachikurudzira kushandisa Firefox Opinion kupa mhinduro pamusoro pemabugs, tsaona, tsaona, maburi uye kurondedzera kuvandudzwa kwebrowser.
Mhoro. Ini ndatova nazvo, asi chirevo changu chingori chimwe chete chausingakwanise kugadzirisa. Kunyangwe iyi blog isina kutenderera inogona kuve nemamwe makuru, muchikamu ndinovimbawo kuti vachazoiverenga. Ini ndakamuudzawo paTwitter. Uye zvakare, yanga iri pano, nezano reFirefox uye neTwitter.
Izvo zvandisingabvumirane nezano rako rekuti "kana iwe ukaisa tenzi password kana kuti haukwanise kushandisa makiyi", ndewekuti iwe unoda kuti kambani ikamanikidze mushandisi hongu kana hongu kuti ishandise tenzi password kuti ishandise iko kushandiswa zvekukiya, ndiko kuti, izvi zvinotoreva kugadzirisa mashandiro eFirefox Sync, nekuti kana usati waisa master password, Firefox Sync haigone kurodha pasi kana kugadzirisa mapassword, manejimendi mapassword kana kuomarara kwavo haisi iro basa rakanangana nekambani, asi wemushandisi wekupedzisira ndiye anoda uye anoshandisa chigadzirwa, zvinogona kuitwa ndezvekuti Mozilla isimbise kukosha mushure mekuitwa kwekutanga kweFirefox uyezve mukushandisa kweFirefox Sync, kushandisa iyo master password ye chengetedzo yekuwedzera mapassword mumamiriro ezvinhu iyo iyo kambani kune chero kusava nehanya kwemushandisi isingakwanise kutora kambani. Zvinonzwisiswa?
MuWindows inoitwa kubva kuFirefox 79 usingashandise tenzi password (inokumbira iyo yemushandisi). Nekudaro, ndine kusahadzika kana vasingakwanise kuzviita muLinux, asi havabvunze mapassword kana Chrome, Firefox kana Opera, vakandiudza, ndakazviedza uye vanogona kuonekwa zvakafanana.
Kumanikidza password ndiyo yakanyanya kuyera chiyero, uye nokutendeseka, ini ndaizotora iyo kuchengetedza vashandisi. Asi ini handishande kuMozilla, kana Google, kana chero imwe kambani inogadzira mabhurawuza. At the least, ivo vanofanirwa kunge vachirevera neimwe nzira.
Asi muchidimbu, zvinoita kunge zvisina kunaka kwandiri kuti chero munhu ane mukana wekupinda mukomputa anogona kudzoreredza ese mapassword akachengetwa mubrowser yavo. Ini ndinotaura maonero angu uye kuti zvinhu zviri sei kuti munhu wese agone kusarudza zvekuita, uye pakati peichi mukana wekushandisa mamwe mamaneja epassword.
Mhoroi, maita basa nekutumira.
Ini ndinokuudza zvimwe, mu linux zvirinani, isa izvo zvinokutendera iwe kushandisa muchina nekuti iwe unofanirwa kubatana neinternet uye kuvhura iyo chrome, iwe pinda mugoogle account yako uye nokusaziva uise account synchronization ... Uff kukanganisa zvese mapassword anotorwa pasi kumuchina iwoyo.
Kusvikira paine zvese zvimwe kana zvishoma ok. Iwe unoenda, iwe unobuda, iwe unobvisawo account yekufananidza, iwe unovhura-vhara Chrome neZaz, ako ese mapassword nemabhukumaki nezvimwe zvakadaro vachiri muchikamu icho chemuchina.
Ok, iwe enda ku chrome, kumberi, gadzirisazve chrome kufekitori neZas, ivo vanoteedzera yako yese ruzivo ipapo
Zvakanaka, uninstall uye gadza Chrome zvakare ... Ufff ako ese mapassword uye rumwe ruzivo rwuchiripo.
Nzira chete yandaifanira kuwana ruzivo rwangu kubva kuiyo linux musangano yaive yekuisa manyore Imba yeiyo Linux chikamu uye kudzima yega yega chrome mafaera.
Chinyorwa chakanakisa, asi muFirefox dambudziko rakatonyanya. Kana iwe uine tenzi password uye shamwari yako inoda kuona mavhidhiyo emakiti, haazokwanise kuita pasina tenzi password, sezvaanokumbira iyo kasingaperi kuti ifambe sezvazvinoitwa nguva zhinji. Mhinduro iri pachena ndeyekuti nekusaisa tenzi password, musangano we "muenzi" unotanga, semuenzaniso, kwausingakwanise kuwana marongero kana marogi. Mune mamwe mazwi, iyo tenzi password inoenderera ichingoshanda chete kune muridzi wekomputa uko Firefox iri kushanda. Iyi nhaurwa yakakomba chaizvo, kwete pakombuta yega, iri zvakare yakakomba pamakomputa emasangano. Kwaziso…
Pindura kuna atreyu94
Kugovana padhuze, iyo "Google AirDrop", ichaenderana neLinux uye chero imwe desktop desktop inoshanda, kana icho chiri icho chinangwa